Darpan Nepal – संघर्षका कुरा : ‘सुरुमा काठमाण्डौ आउदा धेरैले मेरो पैसा खाईदिए’-गायिका पुजा गुरुङ
संघर्षका कुरा : ‘सुरुमा काठमाण्डौ आउदा धेरैले मेरो पैसा खाईदिए’-गायिका पुजा गुरुङ
Jul 20, 2018adminModel0Like
ईटहरी/ नेपाली गायन क्षेत्रमा प्रत्येक दिन नया नया अनुहार आउनु कुनै नौलो कुरा होईन । यस क्षेत्रमा कोहि प्रतिभा भएकै कारणले जमेर काम गर्न आउछन भने कति रहर पुरा गर्न एक दुई गीत गाउन आउने गर्छन । तर सांगीतिक क्षेत्रामा नाम र दाम दुवै कमाउने सोचका साथ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनको लागि गायिका पुजा गुरुङ आफ्नो नया नया प्रस्तुतिका साथ देखा परिरहन्छिन । बन्दिपुर-२ मुचुकमा जन्मेकि गुरुङ सानै देखि आफ्नो स्कुल होस या साथीसंगी सबैका अगाडी गीत गाउथिन । सबैको साथ् र हौसला संगै त्यो बेला गायिका भनेर सबैले जिस्क्याउद उनि मक्खै पर्ने गर्थिन ।
पुजा जब ठुली भईन र म गायिका बन्छु भन्दा धेरैले उनलाई यो राम्रो क्षेत्र होइन यतातिर लाग्नु हुदैन त्यसको अलावा कुनै जागिर खानुपर्छ भन्दै पुजाको गायिका बन्ने यात्रालाई रोक्न धेरैले प्रयास गरे तर पुजाको बुवा आमाले छोरीको सपनालाई रोक्न सकेनन । उडने चरालाई आखिर कसले नै रोक्न सक्छ र ? नभन्दै उनि गायक तथा एरेन्जर महेश बिक्र्म पाण्डेको साथ र सहयोगले गर्दा आज एउटा गायिकाको रुपमा आफ्नो परिचय बनाउन सफल भएकि छिन् । उनले दर्जनौ गीतहरुमा आफ्नो आवाजको जादु चलाइसकेकि छिन् ।
सुरु सुरुमा यो क्षेत्र नबुझेको कारणले काठमाडौ आउदा धेरैले मेरो पैसा खाइदिए उनले यो तितो अनुभव समेत सुनाइन् लामो समयको संघर्ष पछि पूजाले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएकी छिन् । उनि गीत गाउने मात्र नभएर गीत रचना समेत आफैले गर्छिन ।यसबाहेक गुलेली नामक टेलिफिल्ममा पनि सुन बुडिको मुख्य भुमिकामा पूजालाई देख्न सकिन्छ । पुजाले हाल पुजा पुनम अडियो भिडियो सोलुसन प्राली समेत चलाउदै छिन् ।
Previous Postबेसारको चक्कीबाट क्यान्सरकाे हार, महिलाले देखाइन् यस्ताे चमत्कार ! राम्रो कुरा, सक्दो सेयर गरौ Next Postजीवन मरणको सँघारमा पुगेका मनराजलाई बचाउन परिवारले गरे सहयोगको अपिल, कृपया सहयोग गरिदिनु होला सबैले सक्दो शेयर गरौ